“မိသားစုအတွက် ဟင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုနေတဲ့ အောင်ရဲလင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်” - Cele Connections
“မိသားစုအတွက် ဟင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုနေတဲ့ အောင်ရဲလင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။. ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ချောမောခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်.။ လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ကားရိုက်နည်းသွားပေမယ့် ပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို ချပြနိုင်တဲ့ ကားမျိုးကို ရိုက်ချင်တာကြောင့် ကားရိုက်ကျဲသွားတဲ့ အကြောင်းလေးကို မီဒီယာတစ်ခုရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
ခန့်ညားပြီး ချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် ဘယ်လို အဝတ်အစားကိုပဲ ဝတ်ဝတ် ကြည့်ကောင်းလွန်းတဲ့ အောင်ရဲလင်းဟာ ကားရိုက်နည်းသွားပေမယ့် ဖက်ရှင်ရှိုးနဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုတော့ လက်ခံရိုက်ကူးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကို သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ အောင်ရဲလင်းဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အနေဝေသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်ရှိမှာ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်.။ ဒီနေ့ မေလ (၁)ရက်နေ့မှာတော့ အောင်ရဲလင်းက မိသားစုတွေအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို “ဆိတ်သား And ဒိန်ချဉ်.. For My Family” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ မိုင်ဒေးမှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
အောင်ရဲလင်းကတော့ ကိုယ်တိုင်လက်စွမ်းပြကာ မိသားစုတွေအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ဘေးတစ်စောင်းပုံရိပ်လေးနဲ့ ချက်ပြုတ်နေတဲ့ အောင်ရဲလင်းကတော့ ကြည့်ကောင်းလွန်းပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး.။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း အောင်ရဲလင်းရဲ့မိသားစုအတွက် ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။
Source: Aung Ye Lin’s Facebook
“မိသားစုအတှကျ ဟငျးတှကေို ကိုယျတိုငျခကျြပွုနတေဲ့ အောငျရဲလငျးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ”
နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော မငျးသားခြော အောငျရဲလငျးကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။. ကာရိုကျတာတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျပွီး ခြောမောခနျ့ညားတဲ့ ရုပျရညျကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ နှဈခွိုကျအားပေးမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူပဲဖွဈပါတယျ.။ လကျရှိမှာ ရုပျရှငျကားရိုကျနညျးသှားပမေယျ့ ပရိသတျတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး အနုပညာအရညျအခငျြးတှကေို ခပြွနိုငျတဲ့ ကားမြိုးကို ရိုကျခငျြတာကွောငျ့ ကားရိုကျကြဲသှားတဲ့ အကွောငျးလေးကို မီဒီယာတဈခုရဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ပွောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။
ခနျ့ညားပွီး ခြောမောတဲ့ ရုပျရညျကွောငျ့ ဘယျလို အဝတျအစားကိုပဲ ဝတျဝတျ ကွညျ့ကောငျးလှနျးတဲ့ အောငျရဲလငျးဟာ ကားရိုကျနညျးသှားပမေယျ့ ဖကျရှငျရှိုးနဲ့ ကွျောငွာတှကေိုတော့ လကျခံရိုကျကူးနဆေဲပဲဖွဈပါတယျနျော.။ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကို သိပျမသုံးဖွဈတဲ့ အောငျရဲလငျးဟာ ပရိသတျတှနေဲ့ အနဝေသေလို ဖွဈနတောကွောငျ့ လကျရှိမှာ သူ့ရဲ့ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ.။ ဒီနေ့ မလေ (၁)ရကျနမှေ့ာတော့ အောငျရဲလငျးက မိသားစုတှအေတှကျ ခကျြပွုတျပေးနတေဲ့ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို “ဆိတျသား And ဒိနျခဉျြ.. For My Family” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ မိုငျဒေးမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
အောငျရဲလငျးကတော့ ကိုယျတိုငျလကျစှမျးပွကာ မိသားစုတှအေတှကျ ခကျြပွုတျပေးနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖွဈပါတယျ.။ ဘေးတဈစောငျးပုံရိပျလေးနဲ့ ခကျြပွုတျနတေဲ့ အောငျရဲလငျးကတော့ ကွညျ့ကောငျးလှနျးပါတယျနျော ပရိသတျကွီး.။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး အောငျရဲလငျးရဲ့မိသားစုအတှကျ ကိုယျတိုငျ ခကျြပွုတျနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော.။
“မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်းရဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးရောက်တော့မှ ဦးကျော်ကို ပိုပြီး ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ လွမ်းဆွတ်သတိရမိတယ်ဆိုတဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်”
“ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အောင်သူကို ကိုယ်တိုင် လက်စွမ်းပြကာ ဆံပင်ညှပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပိုးအိအိခန့်”